Fandriana fandriana | Mpanamboatra fandriana any Sina, mpamatsy
Fandriana matotra be habe lehibe any an-trano Yongsheng
Ny fitahirizana fanampiny rehetra tadiavinao dia nafenina ao ambanin'ny farafaranao. Nafeniny tamim-pahakingana ireo vatasarihana enina lalina mitazona ny halavan'ny fandriana, Blair dia manolotra habaka mitovy amin'ny mpanao akanjo lava. Ny fampifangaroana ny lokon'ny walnut mafana sy ny Gunmetal, ny farafara am-lampihazo dia misy tsipika madio sy fampifangaroana fitaovana indostrialy.
Fandriana fialofana ao an-trano Yongsheng, fandriana mainty sy roa
Nasiana fanitsiana tsiro miaraka amina fametahana bokotra miavaka, elatra mifanentana tsara tarehy ary fehezan-damban'ny fantsika roa sosona manome ity farafara feno lamba ity ilay endrika manankarena tadiavinao ankehitriny. Fa ny tena hatsaran-tarehin'ny mpanjakavavin'i Vintasso? Ny famolavolana avo lenta dia tonga amin'ny vidiny mirary ambany. Farany, safidy mora vidy ho an'ireo manana tsiro lafo.
• Misy takelaka, takelaka, lalamby ary vatofisaka
• Fofon-koditra mainty vita amin'ny hoditra faux
• Saron-doha misy bokotra misy elatra miaraka amin'ny lovia misy elatra miaraka amina lantom-baravarankely
• Tongotra hazo miharihary
Mikasa ny hamerina ny fahatsapana hatsaram-panahy taloha? Manonofy azy, miaina izany miaraka amin'ny fandriana vy mpanjakavavy Nashburg. Matte mainty miaraka amina “fittings” mamolavola manahaka tsara ny fandriana vy namboarina tamin'ny taloha mba hahitana endrika mety indrindra amin'ny trano fambolena maoderina na fialan-tsasatry ny trano fonenanao.
Yongsheng trano fandriana metaly rehetra, mainty
Miakatra amin'ny haavo avo kokoa amin'ny fomba fanaka ao amin'ny efitrano fandrianan'ny ankizy miaraka amin'ny farafara kambana Dinsmore. Valin-kafatra mahafinaritra amin'ny fironana amin'ny famolavolana indostrialy maoderina, ity farafara vy ity dia manatanjaka ny farany mainty sy fotsy noho ny fahamatorana.